Ka wanaagsan Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah !!. Plusdede ayaa laga heli karaa Google Play Store | Androidsis
Qoraalkan cusub waxaan kugula talinayaa codsi xasaasi ah oo ku saabsan Android, codsi si aad u daawato waxyaabaha ku qulqulaya ama aad si toos ah ugula soo baxdo bartayada 'Android', codsi waa dhab dhab ah maadaama ay tahay aad uga fiican Netflix oo gebi ahaanba waa bilaash.
Codsi sidaan kuu sheegay ugu yaraan xilligan la heli karo si toos ah looga soo dejisan karo Dukaanka Google Plav, in kasta oo ay iyaduna leedahay nooca webka si aad u isticmaali karto oo aad uga daawan karto waxyaabaha ka socda qulqulka shabakad kasta, laga helo nidaam kasta oo ka shaqeeya kaliya adoo ku galaya koontadaada isticmaale.
Codsiga su'aasha ah waxaa loo yaqaan Plusdede waana beddel hadda taas masdede ma shaqeeyo, waad awoodaa si toos ah iskaga diiwaangeli websaydhkaaga oo aad ka isticmaali kartaa shabakad kasta oo shabakad internet ku shaqeysa disla xiriirkan o u soo dejiso si aad ugu isticmaasho hab raaxo leh oo ah codsi loogu talagalay Android leh is-dhexgal aad iyo aad u macquul ah oo xiise leh oo noo oggolaanaya waxqabadyo badan iyo xulashooyinka qaabeynta iyo muujinta waxyaabaha lagu wadaago Plusdede.
1 Kala soo bax Plusdede bilaash Google Play Store
2 Wax kastoo Plusdede na siiya
Kala soo bax Plusdede bilaash Google Play Store
Wax kastoo Plusdede na siiya
Plusdede waxay na siisaa codsi casri ah, dareen leh oo ka shaqeeyey taas oo ay u dheer tahay inuu awood u leeyahay inuu daawado waxyaabaha la soo bandhigayo ama uu si toos ah ugu soo dejisan karo barnaamijyadeenna 'Androids', wuxuu sidoo kale noo oggolaanayaa inaan aragno waxyaabaha sida tooska ah u socda sida dhacdooyinka cayaaraha,
Tan waxaa u dheer, waxaan sidoo kale daawan karnaa waxyaabaha qulqulaya sida filimada iyo taxanaha gebi ahaanba bilaashka ah, dhammaan xilliyada taxanaha sida caanka ah Narcos, Game of Thrones, Mr Robot, Castle, Gotham, Dil, Breaking Bad, Orange waa madow cusub, Wiilal fowdo, Riverdale, Absentia iyo qaar kaloo badan ama filimada sida Tower The Dark, Jhon Wick 2, Dilka Koowaad, Mas'uulka aan la arki karin, Moana, Ha Neefsan, Hacker, Saga Saga oo dhameystiran, Xukunka Nolosha iyo cinwaanno aan dhammaad lahayn oo xiiso leh, warar iyo dhacdooyin mar walba dhaca.
Xiriirka arjiga wuxuu leeyahay a raaxeysi iyo dhinac faaiido leh oo ku saabsan qaabka ugu nadiifsan Qalabka Naqshadeynta kaas oo aan ka xakamayn karno taxanaha iyo filimada aan la soconnoWaxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan abuurno liisas ama jadwal u dhigno dhacdooyinka kalandarka gudaha ee barnaamijka si aanaan u seegin cutubkaas taxanaheena aan ugu jecel nahay ama dhacdo isboorti oo aan xiiseyno.
Taasina waa mid kale oo ka mid ah howlaha waaweyn ee dalabka tan iyo markii Waxay sidoo kale baahisaa waxyaabaha tooska ah in kastoo taasi kaliya laga helo nooca bogga barnaamijka, ama maxaa isaga lamid ahilaa bogga rasmiga ah ee Plusdede adoo ku galaya aqoonsigeenna gelitaanka, taas oo ah, magaca adeegsadeena iyo isgaradkeenna.
Wax kale oo ay tahay in laga muujiyo codsiga rasmiga ah ee Plusdede, codsi aad uga fiican kan Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah, waa taas waxay bixisaa taageero buuxda Google's Chromecast oo shaashadda u diro tayo runtii aad ii cajabisay, waana intaas marka laga soo tago in aad arki karto in aad si wanaagsan u jajabi karto, gudbinta ma goyso waqti kasta ama kuma garaacayso nooc kasta oo jiidis ah xitaa marka la eego isku xirnaanta hooseeya sida mid aan ku haysto guriga, kaas oo ah adsl dirqi ah oo gaadha 5 Mbs oo xog ah oo laga soo dejiyo.
In kasta oo intaas oo dhan aanu halkaa ku dhammaanayn, waana intaas sidoo kale waan kala shaandheyn karnaa waxa ku jira barnaamijka, ha ahaato taxane ama filimo by nooc, aragtiyo badan ama warar, waxaa sidoo kale naloo fidiyay laba qaybood oo gaar ah, oo laga heli karo dhinaca bidix ee aan awoodno keydi taxanaheena iyo filimada aan jecel nahay iyo kuwa aan hada la soconno.
Waxaan sidoo kale leenahay aag soo dejin taas oo ah halka ay ka kooban tahay waxyaabaha aan go'aansano inaan soo dejino ay u muuqato waqti kale iyada oo aan loo baahnayn isku xirnaan shabakadeed, iyo a bilowga aagga aan ka heli karno cutubka xiga ee taxanaha aan daawaneyno.
Waxaas oo dhan oo aan kuu sharraxay iyo sida wanaagsan ee barnaamijka Android u shaqeeyo, maanta, Sabtida bartamaha dhammaadka usbuuca iyo kow iyo tobanka habeenimo ee Isbayn ka dib, waxaan u qorayaa maqaalkan si aan ugula taliyo kan ilaa hadda iyo dambe isticmaal maalintii oo dhan, waa aniga dalabka ugu fiican ee bilaashka ah si aad u daawato taxanaha iyo filimada si bilaash ah u socoshada ama ku soo dejiso iyaga oo bilaash ah tayo aad iyo aad u wanaagsan.
Aad ayuu uga fiican yahay Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah !!
Haddii aadan si rasmi ah uga soo dejisan karin arjiga Google Play Store, ama sababtoo ah horay ayaa loogala noqday ama sababtoo ah waddankaaga lama heli karo, markaa Waxaan kugula talinayaa inaad ku dhex marto bulshada Androidsis Telegram tan iyo halkaas waxaad ka awoodi doontaa soo dejiso arjiga asalka ah adigoon wax is daba marin ah, App leh xayeysiis isku dhafan oo naga dhigaya inaan sugno 10 ilbiriqsi ka hor inta aan daawanin cutubka taxanaha ama filimka aan ugu jecel nahay, xayeysiin in kasta oo mararka qaar xoogaa dhib ah, ay tahay lacag bixin macquul ah si aan ugu raaxeysanno dhammaan waxyaabaha aan nahay oo gebi ahaanba la bixiyo bilaash ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » Ka wanaagsan Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah !!. Plusdede ayaa laga heli karaa Google Play Store
Waa dalabkii ugu xumaa ee playstore lag iyo inaad ka kor marto xayeysiinta buuxda.
Jawaab Miguel Lorenzo
Jawaab ku sii Rocío Verdeal
Codsigu waa weyn yahay, waxaan istcimaalaa seddex maalmood wuuna fiicnaanayaa, xayaysiinta boodboodaya waa mid lamid ah kuwa ku booda ciyaaraha badankood kuwaas oo ay tahay inaad sugto toban ilbiriqsi si aad u awoodo inaad ka boodo Toban ilbiriqsi kadib dib uqabashada ayaa si toos ah u bilaabmaysa oo aan kala go 'lahayn, marka lagu daro haddii adeegaha aad dooratay uusan shaqeyn ama hoos u dhicin, wuxuu aadayaa inuu raadsado kuwa soo socda.
Ku jawaab androidsis
Mid ADSL-na leh ayaa kuu sheegaya inuu si dhib yar ku gaarayo 5Mbs.
Laga soo bilaabo furitaanka iyo hadda fiidiyowga oo aan si fudud u soo dejisan karin ... waa wax laga xumaado ...
Jawaab Peke Danny
Nolosha wax bilaash ah ma fahmaan
Jawaab José Luis Buenaño Durán
bilaash waa qaali
Haha durdur ka yar
Tani waa ostia !! Nacalad, antivirus waxba ma ogaato, laakiin barnaamijku wuu ka shakisan yahay gudaha iyo haddii uu leeyahay xayeysiin !! markasta oo aad isku daydo inaad wax soo dejiso. Kaliya ciyaaryahanka ayaa bilaabanaya ... https://mobile.twitter.com/Plusdedecom/status/910866035221434368?p=v
Maxaa ku dhacay androidsis ka hor intaadan qaboobin !!!
Laakiin codsigan ma sharci baa? Waxaan weydiisanayaa isbarbardhiga NetFlix.
Waxaan dareemayaa xamaasad, xamaasad aan caadi ahayn, xiisaha xad dhaafka ah ee aan u leenahay inaan ku soo dejino codsigan sharci ahaanta laga shakisan yahay (runti, adiga laftaada ayaa ka shakisan in wali laga heli karo GPlay). Waad arki kartaa boodhka, maaddaama aan qiyaasayo in kani yahay maqaalka caadiga ah ee la kafaala qaaday, waxaan ku qaadi doonnaa xoogaa yuuro ah siinta buunbuunin codsi, taas oo marka lagu daro muujinta wejiga lahaanshaha ee wejiga, yaa garanaya waxa kale ee ay qarineyso .
Xaqiiqdii waad saxantahay saaxiib, wixii dalabku igubixiyey markaan kugula taliyay, barnaamij aan xasuusto wuxuu kujiraa Google Play Store oo ah keydka rasmiga ee arjiga loogu talagalay Android, laga yaabee inaan iskaga noqdo Caribbean-ka ama Maldives! !!
Halkan at Androidsis waxaan kugula talinayaa codsiyada maalin kasta midkoodna lama kafaala qaado ama lama bixiyo. Waxaan si fudud ugu taliyaa waxa aan doonayo oo waxaan u arkaa mid xiiso leh in lagu taliyo!
Waan ogahay laambad wanaagsan oo aad ku xidhi karto rakibida korontada ee gurigaaga, adigoon xaddidnayn koronto ama jarin. Aad ayey ugafiican tahay shirkadaada korontada oo gebi ahaanba bilaash ah!
Maqaalkaas yari waa ceeb. Ku dhiirrigelinta dadka inay joojiyaan bixinta Netflix, sida haddii doqonno tahay in sidaas la sameeyo. Halkee ayaad u malaynaysaa inay lacagtu ka timaaddo si loo abuuro nuxurka? Waa hubaal inaysan ka soo bixin xayeysiiska codsigan, xitaa haddii aad u aragto inay yihiin "lacag bixin macquul ah."
Maxaad u malayn lahayd haddii ay ku toogtaan maqaal kasta oo aad ku daabacdo degelkan, si ay uga faa'iidaystaan ​​dhinac saddexaad iyo websaydhyo kale ay u xayaysiiyaan?
Nalalkaas yar waxay leeyihiin lammaane, dusha sare oo qiyaastii ah 50 tacos.
«Waan ogahay laambad wanaagsan oo aad ku xidhi karto rakibidda korontada ee gurigaaga, adigoon xaddidnayn koronto ama jarin. Aad ayey ugafiican tahay shirkaddaada korontada oo gebi ahaanba bilaash ah! »
Marka la eego faallooyinkaaga, waxaan kuu sheegayaa waxa ay tahay inaan wada qabanno oo dhan si aysan nooga qaadin koronto qiimaha ay hadda naga qaadaan si aan u bixino mushaharka siyaasiyiinta musuqmaasuqa iyo damiir laawayaasha ah ee ku fadhiya guddiyada agaasimayaasha. shirkadaha korontada. Tusale maxaad isiisay !!!
NesDayaanna _ dijo
_ Wax karaahiyo ah, cadaadis ayaa ka wanaagsan Netflix seddexdii erayba, waan ogahay inaysan ahayn dhexdhexaad dhexdhexaad ah laakiin tani waa wax laga xumaado ...
Waxaan isku dayay 3 filim iyo 3 taxane ah midna ma aanan arkin, serverka ayaa buuxa waana la saaray xiriiriyeyaasha.
Maxaad u leedahay way ka fiican tahay Netflix? In Netflix wax walba isla markiiba buuxi, dabcan waxyaabaha ku jira aad ayaa loo cusbooneysiiyaa.
Jawaab Ignacio Joel Perez Marquez
Waxay leedahay xayaysiisyo loogu talagalay filimada qaawan iyo 'dumarka doonaya galmada'; laguma dhigi karo guriga. Naxariis
Jawaab Miguel Angel D.
Ma fahmin sidaad u daabacdo maqaal ku saabsan app kuu ogolaanaya inaad aragto nuxurka lacag la bixiyo adigoon bixin. Taasi waa, sharci darro.
Waxaan u arkaa inay tahay wax laga xishoodo inaad xayeysiiso codsiyo u adeegaya nuxur sharci ama sharci darro ah taasna waxaa sii dheer inay nagu mideynayaan xayeysiinta. Waxaad sidoo kale dhex martay peteneras waxaadna nooga boodaysaa arrimo siyaasadeed oo ku saabsan barta internetka ee Android si aad u difaacdo in dadku khiyaameeyaan nidaamka.
Way adag tahay in la helo ereyo lagu sifeeyo sida nasiib-darrada ah ee tani tahay.
Cabashooyinka Google ee ah inaan kaliya la wadaagay barnaamij si sharci ah loogu martigaliyay dukaanka dalabka Android in muddo ah.
Ah !! Iyo hal shay oo kale oo dhagaxa ugu horreeya dhigaya haddii aadan waligaa rakibin barnaamij sharci-darro ah, Windows jabsaday ama barnaamij u qalma cajiinka sida Photoshop.
Oggolow in maqaalka uu ka buuxo iswaafaqla'aan halkii aad ku tuuri lahayd, Francisco.
Haddii qof xiiseynayo, bedelkiisaba waa haha, kuwa playdede.com Telegram-kooda ayaa dhigay beta si ay u awoodaan inay arkaan masraxa sida aan u aqriyay waxay bilaabayaan maalmo yar gudahood.
Barnaamijyada Qaboojinta Telefoonka Gacanta: Runtii ma shaqeeyaan?